Administratera sivily : Niharan’ny fandratrana sy fandrobana -
AccueilSongandinaAdministratera sivily : Niharan’ny fandratrana sy fandrobana
Hiakatra etsy anivon’ny Fampanoavana anio ny raharaha fandratrana niharo fandrobana nihatra tamina administratera sivily iray sy ny vadiny ny faha-29 Aprily lasa teo teny Arivonimamo. Saika niharan’ny fitsaram-bahoaka ireo mpisetrasetra…
Avy nijery irony antsoina hoe “run” irony izy mivady no niharan’ny herisetra niharo fandrobana, ka very tamin’izany ny fakan-tsary sy ny vangovango teny an-tanan’ilay ramatoa, naratra ary voatery nozairina tetsy amin’ny HJRA kosa ilay administratera. Nosongonan’izany fiara Sprinter nirimorimo fatratra izany izy mivady teo amina lalan-dratsy, ka voatery nalatsaka tany amin’ny sisin-dalana mihitsy ilay fiara BMW nentin’izy ireo raha tsy izany… Nifanao aloha sy aoriana kosa anefa rehefa teny amin’ny arabe saingy tsy nomen’ny mpamilin’ilay Sprinter lalana, ary farany nobahanany mihitsy ny arabe. Nivoaka ilay administratera nitondra ilay BMW nikasa hanontany ny anton’ny fihetsik’ity mpamily ilay Sprinter kinanjo “coup de tête” indroa nisesy no azony ka vaky rà vokatr’izany ny orony. Nisy vatan-dehilahy maromaro kosa nivoaka tao anatin’ilay fiara, ka ny sasany nanampy nidaroka ilay administratera, ny hafa kosa nandroba ny vadiny tao anaty fiarakodia, ka very tamin’izany ny fakan-tsary sy ny vangovango teny an-tananan’ilay ramatoa.
Nitangorona avy hatrany ny olona nahita izao herisetra miharo fandrobana izao, ka saika niharan’ny fitsaram-bahoaka ireto andian-dehilahy nandeha Sprinter ireto. Nanatona ny HJRA nitsabo tena ilay administratera sivily nialohan’ny nametrahany fitoriana teny anivon’ny Fampanovana. Androany araka ny fantatra no hiakatra eny anivon’ny Fampanoavana ny raharaha taorian’ny fanadihadiana nataon’ny polisim-pirenena avy etsy Ambohidahy.
Be loatra tokoa ireo mpamily mpisetrasetra eny amin’ny arabe eny ary tena mampidi-doza tokoa, tonga amin’ilay fitenin-jatovo manao hoe “didin’ny be sandry”. Tsy azo ekena ary mendrika ny hosaziana mafy kosa anefa izay tompon’antoka tamin’izao zava-nanjo ity administratera sy ny vadiny ity mba ho anatra ho an’ny hafa, ho fampajakana ny tany tan-dalàna tsy hiverenan’ny fihetsika “baribariana” tahaka ny nataon’ireto andian-dehilahy nitondra Sprinter ireto.